FAQ fampahalalana manan-danja indrindra
+ 48 58 333 1000 biuro@e-centrum.eu Antsoy na sorata aminay!
FAQ fahalalana fototry ny FAQ. Ity ambany ity ny vaovao lehibe indrindra momba ny angona hetsika. Raha mila fanazavana fanampiny, tsindrio ny lohahevitra mahaliana anao.
IZANY DIA TOKONY IZAO REHETRA TOKONY MBOLA TOERANA CYBER-SAFE INDRINDRA
Sonia elektronika mendrika
Ho an'ny mpanjifantsika
Taratasy fanamarinan'ny tombo-kase elektronika
"Taratasy tombo-kase elektronika" dia midika mari-pankasitrahana elektronika izay mitambatra angon-drindrina
tombo-kase elektronika misy olona ara-dalàna ary manamafy ny anaran'io olona io;
Taratasy sonia elektronika
"Taratasy fanamarinana ny sonia" dia midika fanamarinana elektronika izay mampifandray ny angona taloha
manamarina ny sonia elektronika amin'ny olona voajanahary ary manamarina ny anarany na ny anaram-bosotra amin'izany
Inona no mpamatsy serivisy fitokisana (TSP)?
Araka ny Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS), ny mpanome tolotra fitokisana (TSP) dia faritana ho “olona voajanahary na ara-dalàna izay manome serivisy fitokisana iray na maromaro ho toy ny mpanome tolotra fitokisana mahay na tsy mahay. "TSPs dia tompon'andraikitra amin'ny fiantohana ny famantarana elektronika an'ireo nanao sonia sy serivisy amin'ny alàlan'ny mekanisma fanamafisana matanjaka, mari-pahaizana nomerika ary sonia elektronika.
Ny eIDAS dia mamaritra ny fomba anaovan'ny mpanome tolotra fitokisana ny serivisy fanamarinana sy ny tsy fandavana ary ny fomba hanaovana ny fanaraha-maso azy sy ekena ao amin'ny United States Member.
TSP dia mety hanome ny iray na maromaro amin'ireto serivisy manaraka ireto:
Famoronana, fisavana sy fankatoavana sonia elektronika, tombo-kase na hajia ara-potoana, serivisy fanaterana fisoratana anarana sy fisoratana anarana mifandraika amin'ireo serivisy ireo.
Mamorona, manamarina ary manamarina ny taratasy fanamarinana hampiasaina amin'ny fanamarinana ny tranokala.
Ny fitazonana sonia elektronika, tombo-kase na fanamarinana mifandraika amin'ireto serivisy ireto.
Inona ny atao hoe EIDAS?
eIDAS dia anarana fampiasa matetika amin'ny lalàna mifehy ny EU, 910/2014, momba ny serivisy fampahafantarana sy ny fahatokisana ny fifanakalozana elektronika elektronika amin'ny tsena anatiny, ny famerenana ny lisitry ny sonia taloha 1999/93 / EC. izay midika fa ny serivisy ho an'ny daholobe any Etazonia dia tsy maintsy manaiky ny rafitra ara-elektronika nasionaly (eID). Amin'ny alàlan'ny eIDAS, ny olompirenena sy ny orinasam-bola dia afaka mahazo tombontsoa amin'ny fandaharan'asa an'ny zaza tsy miankina amin'ny firenena raha mampiasa ny serivisy ho an'ny daholobe any amin'ny Etazonia mpikambana mpikambana izay mampiasa ny programa eIDS. Ity fitsipika ity dia mamaritra ny fepetra izay aneken'ny Etazonia mpikambana ny fanekena elektronika amin'ireo mpampiasa
Ankoatr'izay, ity fitsipika ity dia mametraka fenitra ho an'ny sonia elektronika, hajia amin'ny fotoana, tombo-kaseo elektronika ary antontan-taratasy hafa manamarina ny maha-azo itondrana, ao anatin'izany ny fanamarinana ara-elektronika sy ny serivisy fanaterana fisoratana anarana, izay manome ireo sata ara-dalàna ireo raha toa ka notanterahina tamin'ny taratasy.
Ny serivisy fitokisan'ny eIDAS amin'ny famoronana tsena anatiny elektronika dia misy:
Sonia elektronika mandroso sy mahay mifandraika amin'ny olona ara-dalàna na voajanahary.
Ireo tombo-kase elektronika mandroso sy mahay mifandraika amin'ny sampana ara-dalàna
Fanamarinana ny fahazoana manana sonia elektronika mahay
Ny fitazomana tsara ireo sonia elektronika mahay
Fanomezana serivisy elektronika
Fanamarinana ny tranokala
Ny fampiharana ny EIDAS dia azo notanterahina nanerana ny Vondrona Eoropeana .. Nanomboka tamin'ny 1 Jolay 2016 dia nanasokajiana karazana sonia elektronika azo antoka ny eIDAS:
1) sonia elektronika mandroso
2) sonia elektronika mahafeno
Cryptomathic dia manome vahaolana sonia lavitra ho an'ny karazany roa.
Inona no taratasy fanamarinana mahafeno?
Mifanaraka amin'ny Fitsipika (EC) No. 910/2014 (eIDAS) eIDAS, ny taratasy fanamarinana mendrika ho an'ny sonia elektronika dia manondro ny "taratasy fanamarinana sonia elektronika navoakan'ny mpanome tolotra fitokisana mahay"
ary mahafeno ny fepetra takian'ny fanavaozana.
Araka ny fepetra takiana amin'ny eIDAS, ny fanamarinana sonia elektronika mahafeno fepetra dia tsy maintsy misy:
Famantarana azo fantarina amin'ny alàlan'ny fanodinana automatique fa ny taratasy fanamarinana dia fahazoan-dàlana mendrika ho an'ny sonia elektronika
Ny angon-drakitra voatondro mazava misolo tena ny mpanome tolotra fahatokisana izay namoaka ny taratasy fanamarinana mahafeno, anisan'izany ny fampahalalana toy ny:
Ny mpikambana mpikambana manolotra ireo serivisy izay nametrahana ny orinasam-pifandraisana
Anarana sy isa fisoratana anarana raha toa ka sampandraharaha ara-dalàna ilay mpamatsy tolotra
Anaran'ny mpamatsy raha toa izy dia olona voajanahary
Anaran'ny sonia na fanondroana raha ampiasaina anaram-bosotra
Angon-drakitra mifandraika amin'ny fanekena ny sonia elektronika sy angon-drakitra momba ny fananganana sonia elektronika
Fampahalalana izay mamaritra ny vanim-potoanan'ny taratasy fanamarinana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany
Fanalahidin'ny mari-pankasitrahana ny mpanome mari-pankasitrahana itokisana
Famoahana sonia elektronika mandroso na tombo-kase elektronika an'ny mpanome tolotra fitokisana
Ny toerana misy ny taratasy fanamarinana manohana sonia elektronika mandroso dia maimaim-poana
Ny fanondroana, tsara kokoa amin'ny endrika fanodinana automatique, izay misy ny angon-drindrina famantarana ny sonia elektronika mifandraika amin'ny angon-drindrina fanamarinana sonia elektronika dia napetraka ao anaty fitaovana famoronana sonia elektronika mahafeno fepetra.
- misy fiatraikany ara-dalàna mitovy amin'ny sonia vita tanana (Asan'ny 18.09.2001 septambra XNUMX momba ny sonia elektronika)
- natokana ho an'ny olona voajanahary, navoaka tamin'ny alàlan'ny fifanarahana ary aorian'ny fanamarinana ny maha-izy azy (ny tena) ao amin'ny Pointe registrement CA
- Ampiasaina isaky ny mandefa fanambarana didim-pananana (ao anatin'izany ny e-faktiora) dia tsy ampiasaina hialokalofana rakitra
Inona no famantarana sonia elektronika mendrika?
Ny sonia elektronika mahafeno fepetra dia ity
"Sonia elektronika mandroso miaraka amina taratasy fanamarinana nomerika izay nisoratana anarana tamin'ny alàlan'ny fitaovana famoronana sonia azo antoka"
Ny sonia elektronika mahay noho izany dia mampitombo ny haavon'ny fiarovana omen'ny sonia elektronika mandroso. Mifanaraka amin'ny ara-dalàna amin'ny sonia vita tanana àry izy io.
Raha toa ka mahafeno ny fepetra takiana ao amin'ny eIDAS ho an'ny sonia elektronika mahay ny sonia, dia azo ampiasaina amin'ny fizotry ny fitsarana ho porofo izany. Ny firenena mpikambana ao amin'ny EU rehetra dia tokony hanaiky an'io karazana sonia io raha toa ka novokarina tamin'ny taratasy fanamarinana mendrika avy amin'ny Fanjakana mpikambana iray hafa.
Voalohany, andao jerena izay atao hoe "mpanao sonia mahay". Mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny eIDAS,
Ny fitaovana dia tsy maintsy manome:
Tsiambaratelo ny angon-drakitra sonia elektronika
Ny angon-drakitra momba ny famoronana elektronika ho an'ny famoronana sonia elektronika dia mety hitranga indray mandeha ihany
Ny angon-drakitra momba ny famoronana elektronika ho an'ny famoronana sonia dia tsy ho azo ary arovana amin'ny famitahana amin'ny alàlan'ny teknolojia misy ankehitriny
Ny angon-drakitra momba ny famoronana elektronika nampiasaina mba hamoronana sonia dia mety ho arovana amin'ny sonia ara-dalàna amin'ny fampiasana ny hafa
Tsy manova ny angon-drakitra hosoniavina na fisorohana ny sonia tsy asiana mari-pamantarana izany alohan'ny hanaovana sonia ny fifanarahana
Ny mpanome tolotra irery ihany no afaka mamorona na mitantana fampahalalana momba ny sonia
Tsy misy fitsarana an-tendrony. (d) teboka 1, mpanome tolotra fahatokisana mitantana ny angon-drakitra famoronana sonia elektronika ho an'ny sonia dia mety handika ny angon-drakitra famoronana sonia elektronika ho an'ny tanjon'ny backup, raha toa ka notanterahina ireto fepetra ireto:
Ny fiarovana ny databetna fandokoana dia tsy maintsy mitovy amin'ny datasets tany am-boalohany
Ny isan'ireo andian-dahatsoratra avo dia tsy tokony hihoatra ny farafaharatsiny ilaina hiantohana ny fitohizan'ny serivisy
Ny Firenena mpikambana mpikambana ao amin'ny EU dia tsy maintsy manaiky ny maha-ara-dalàna sonia elektronika manana endrika noforonina amin'ny alàlan'ny Fanjakana mpikambana iray.
Ny sonia elektronika mahafeno fepetra dia sonia elektronika mandroso avy amin'ny mari-pahaizana nomerika mahay izay noforonin'ny fitaovana famoronana sonia mahay (QSCD). Mba hisian'ny sonia elektronika iray heverina ho sonia elektronika mahay dia tsy maintsy mahafeno fepetra telo lehibe izany:
Voalohany, ny sonia dia tsy maintsy mifandray ary voafaritra mazava ho an'ny sonia.
Ny teboka faharoa dia ny angon-drakitra ampiasaina hamoronana ny sonia dia tsy maintsy eo ambany fanaraha-mason'ny sonia.
Farany, tsy maintsy mamantatra raha nahitana an-tsakany sy an-davany ny angon-drakitra mifandraika amin'ny sonia nanomboka ny sonia ilay hafatra.
Inona no atao hoe tsy fandavana?
Tsy azo lavina ny fahatokiana fa tsy misy olona afaka mandà ny maha-zava-dehibe ny zavatra iray. Ny tsy fandavana dia hevitra ara-dalàna be mpampiasa amin'ny fiarovana ny vaovao ary manondro serivisy manome porofon'ny fiandohan'ny data sy ny fahamendrehan'ny angona. Raha atao teny hafa, ny tsy fandavana dia manasarotra ny fandavana am-pahombiazana hoe avy aiza / avy aiza ilay hafatra, ary koa ny maha-marina ny hafatra. Ny sonia niomerika (miaraka amina fepetra hafa) dia afaka manolotra tsy fandavana ny fifanakalozana an-tserasera izay ilaina mba hahazoana antoka fa ny antoko iray amin'ny fifanarahana na fifandraisana dia tsy afaka mandà ny maha-izy azy ny sonian'izy ireo amin'ny antontan-taratasy na fandefasana ny fifandraisana voalohany indrindra. Amin'ity toe-javatra ity, ny tsy fandavana dia manondro ny fahaizana miantoka fa ny antoko amin'ny fifanarahana na fifandraisana dia tokony hanaiky ny maha-azo antoka ny sonian'izy ireo ao anaty antontan-taratasy na hafatra iray.
Inona no atao hoeSignSign?
SimpleSign dia rindranasa finday iray izay ahafahanao manasonia ny antontan-taratasy rehetra miasa amin'ny kinova elektronika. Ao anatin'ny fampiharana ity dia misy ihany koa ny mpamorona kaody famantarana, izay ilaina mba hamantarana ny mpampiasa amin'ny fizotran'ny fidirana amin'ny serivisy. Sintomy ny SimpleSign amin'ny findainao hampiasa ny generator code code, izay manondro ny mpampiasa amin'ny fizotran'ny sonia amin'ny solosaina nentim-paharazana: PC / Mac OS.
Amin'ny maha fampiharana an'io dia misy koa ny alàlan'ny alàlan'ny fanoratana ny antontan-taratasy amin'ny finday.
raha efa nametraka EasySign amin'ny findainao ianao, dia tsy mila mamerina azy indray ianao.
Misintona EasySign Desktop mba hahafahanao mampiasa serivisy manan-danja eo an-tsena toy ny: Payer, eDeklaracjie, ePUE, sns.
Ny fampiharana EasySign Desktop dia manetsika mampifandray carte criptografika vatana sy mpamaky karatra amin'ny solosainao.
Misaotra an'ity vahaolana ity dia ho afaka mampiasa EasySign ianao ireo fampiharana izay mitaky ny fampiasana karatra ara-batana.
Ity fampiharana ity dia ahitana ihany koa ny module proCertum SmartSign izay mamela sonia antontan-taratasy ao amin'ny solosaina nentim-paharazana: PC / Mac OS
Inona no sonia elektronika mandroso?
Ny sonia elektronika mandroso dia sonia nomerika miorina amin'ny taratasy fanamarinana mandroso izay mampiavaka ilay mpifaninana. Ny lakile sonian'ny sonia dia ampiasaina amin'ny fahatokisan-tena lehibe avy amin'ny sonia (izay manana fifehezana tokana amin'ny fanalahidy sonia).
Ao amin'ny rafitra eIDAS, sonia elektronika dia heverina ho mandroso raha toa ka mahafeno fepetra takiana maro, ao anatin'izany:
manavaka sy mampifandray ny sonia azy
ny lakile tsy miankina ampiasaina hananganana sonia elektronika dia eo ambany fifehezan'ny sonia
Raha toa ka nampandefitra ny angon-drakitra taorian'ny nanoratana ny hafatra dia tsy maintsy mamantatra ny zava-nitranga ny sonia
fanafoanana ny sonia famantarana raha niova ny angon-drakitra miaraka.
Data manondro olona iray
Ny angon-drakitra "identification person" dia midika andiana angon-drakitra ahafahana mampahafantatra olona iray voajanahary na
olona ara-dalàna na olona voajanahary izay misolo tena ny olona iray ara-dalàna;
Data momba ny fifandraisana elektronika
NY FANAVOTANA NY FIVORIANA TRANO TRANO EUROPANANA ARY VEHIVAVY
momba ny fiainana manokana sy ny fiarovana ny angon-drakitra manokana amin'ny serasera
Directive elektronika sy mamerina ny Direction 2002/58 / EC (régime on
tsiambaratelo sy fifandraisana elektronika)
(Text with relevance EEA)
NY FOTOTRAANA AN'ANDRIAMANITRA EUROPEHANA ARY VOIVENY NY FIVORIANA EKONDRONA,
Raha dinihina ny fifanarahana momba ny fampandehanana ny vondrona eropeana ary indrindra ny lahatsoratra 16
Rehefa dinihina ny tolo-kevitry ny Vaomiera Eropeana.
aorian'ny fampitana ny volavolan-dalàna momba ny volavolan-dalàna ho an'ny parlemantam-pirenena,
1. Fandinihana ny hevitry ny Komity ekonomika sy ara-tsosialy eropeana
2. Fandinihana ny hevitry ny Komitin'ny Faritra
3. mandinika ny hevitry ny Mpanolotsaina miaro ny data momba ny eropeana
Manao hetsika mifanaraka amin'ny fomba fanaovan-dalàna mahazatra,
Ary satria, araka izao manaraka izao:
“… Tsiambaratelo ny angona fifandraisana elektronika. Izay fitsabahana amin'ny data
nalaina avy amin'ny serasera elektronika toy ny fihainoana, fampidinana, fitahirizana,
fanaraha-maso, fandefasana scan na karazana fifandraisana hafa, fanaraha-maso na
fanodinana angon-drakitra fifandraisana elektronika ataon'ny olona hafa ankoatra
mpampiasa farany, voarara,…. "
“… Ny atin'ny fifandraisana elektronika dia momba ny votoatin'ny zon'olombelona ifotony
fanajana ny fiainana manokana sy ny fiainam-pianakaviana, ny fifandraisan'ny trano sy ny herinaratra
kanto. Sata 7 momba ny zon'olombelona. … Ity fitsipika ity dia manome
ny fahafahan'ny mpanome serivisy serasera fifandraisana elektronika amin'ny fizotrana
avy amin'ny serasera elektronika miaraka amin'ny faneken'ny rehetra
mpampiasa farany liana…. "
Angon-drakitra zatra mametraka sonia elektronika
"Angon-drakitra famoronana elektronika" dia midika angon-drakitra tsy manam-paharoa izay ampiasain'ny sonia
fananganana sonia elektronika;
Fanohanana teknika maimaimpoana
Fanohanana ara-teknika maimaim-poana - 24 H / 7 andro isan-kerinandro ihany ho an'ireo mpanjifantsika izay mividy, mampihetsika ary mametraka sonia elektronika ao amin'ny biraonay any Gdynia.
Miezaka ny hanao ny programa izahay ho azo itokisana. Izahay kosa dia vonona hatrany hanampy amin'ny raharaha teknika mifandray amin'ny asany na ny dikan-ny fampiharana vaovao.
Fidio ny endrika fanampiana mety indrindra aminao
Call Center rehefa manana olana amin'ny fametrahana ianao ary manomboka miasa amin'ny programa, ary koa amin'ny raharaha antsoina hoe lesoka rafitra;
amin'ny alàlan'ny programa TeamViewer azo antoka dia hifandraisantsika amin'ny solosainao ary hanatontosa ireo dingana ilaina hamahana ny olana;
ETO NO HAHAZOAN'NY FANAMPIANA TEKNIKA MAFY MOMBA NY CERTIFICATE "CERTUM".
AZONAO FIVORIANA ANAO:
- Amin'ny Internet: 58 5055 910
- MITSARATRA SA MANDEHA MAMPIASA WIDGET - EO ankavanin'ny SCREEN.
Misaotra ireo modely natokana ho an'ny "Team Viewer QS" - vahaolana # 1 manerantany amin'ny sehatry ny fanohanana teknika lavitra, afaka nifandray tamin'ny solosainao tao anatin'ny fotoana fohy izahay ary nanala ilay kilema ary mitazona ny fenitra rehetra mifandraika amin'ny fiarovana ny angon-drakitrao.
Azo antoka ve izany vahaolana izany?
Eny. Ny module "Team Viewer QS" dia tsy tafapetraka maharitra amin'ny solosainao, fafanainao rehefa ilaina ny serivisy, ary mila ny fankatoavanao ny fifandraisana tsirairay.
Raha mbola tsy mpanjifanay ianao dia tsy misy zavatra mahatsiravina - hanampy ihany koa izahay.
Amin'ity tranga ity dia homena takelaka kely ianao noho ny ezaka ataontsika, fa hahazo fanampiana matihanina ianao.
"Tahirin-kevitra elektronika" dia midika hoe misy afa-po izay voatahiry amin'ny endrika elektronika, indrindra ny lahatsoratra na
feo, feo na rakotra haino aman-jery;
toromarika dia hetsika ara-dalàna an'ny Vondrona Eropeana izay mitaky fanjakana mpikambana hahatratra vokatra iray nefa tsy mibaiko ny fomba hahatratrarana izany vokatra izany. Izy io dia azo avahana amin'ny lalàna mifehy tena ary tsy mila fepetra fampiharana. Matetika ny torolàlana dia mamela ny fahalalahana ho an'ny Fanjakana Mpikambana momba ny fitsipika tokony harahina. Ny torolàlana dia azo raisina amin'ny alàlan'ny fomba fanaovan-dalàna samihafa arakaraka ny foto-kevitr'izy ireo.
eIDAS (electronic IDfamporisihana, Authentication sy ny fahatokisana Services) dia lalàna mifehy ny serivisy momba ny famaritana sy ny fahatokisana ny fifanakalozana elektronika elektronika amin'ny tsena anatiny. Izy io dia andiam-pandrefesana ho an'ny famantarana ny elektronika sy ny serivisy fitokisana amin'ny fifanakalozana elektronika amin'ny tsena tokana eropeana. Niorina tao amin'ny Fitsipika EU № 910/2014 tamin'ny 23 Jolay 2014 momba ny famantarana elektronika sy ny fanafoanana ny torolàlana 1999/93 / EC nanomboka ny 30 Jona 2016. Nanomboka tamin'ny 17 septambra 2014. izany dia nanomboka tamin'ny 1 Jolay 2016.
eIDAS dia manara-maso ny serivisy momba ny elektronika sy ny serivisy fitokisana amin'ny fifanakalozana elektronika eo amin'ny tsena anatiny an'ny Vondrona eropeana Izy io dia mifehy ny sonia elektronika, ny fifanakalozana elektronika, ny manampahefana voakasik'izany ary ny fomba fampidirana azy ireo mba hanomezana fomba azo antoka ho an'ny mpampiasa amin'ny asa aman-draharaha amin'ny Internet, toy ny famindrana vola elektronika na fifampiraharahana amin'ny serivisy ho an'ny daholobe. Na ny mpanao sonia na ny mpandray dia mahazo fidirana amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa sy filaminana. Raha tokony hiantehitra amin'ny fomba nentim-paharazana toy ny mailaka, serivisy fax na mivantana handefa antontan-taratasy izy ireo dia afaka manatanteraka fifanakalozana manerana ny sisintany, ohatra amin'ny "teknolojia 1-click".
namorona fenitra ny eIDAS izay misy sonia elektronika, mari-pahaizana nomerika mahay, tombo-kase elektronika, tombo-kase ara-potoana ary porofo hafa momba ny rafitra fanamarinana mamela ny fifanakalozana elektronika mitovy amin'ny ara-dalàna mitovy amin'ireo natao tamin'ny taratasy.
Nihatra tamin'ny Jolay 2014. Ny lalàna mifehy ny eIDAS dia fepetra iray hanamorana ny fifanakalozana elektronika azo antoka sy milamina ao amin'ny Vondrona eropeana. Ny firenena mpikambana EU dia voatery manaiky sonia elektronika mifanaraka amin'ny fenitry ny eIDAS.
Ny "hajia elektronika" dia midika angon-drakitra amin'ny endrika elektronika izay mamehy ny data hafa amin'ny endrika elektronika
rehefa mandeha ny fotoana, dia manome porofo fa efa nisy io data hafa io;
"Fanondroana elektronika" dia ny fizotran'ny fampiasana data data elektronika ahafantarana ny olona iray,
fanehoana tsy manam-paharoa maneho ny olona voajanahary na ara-dalàna, na olona voajanahary izay misolo tena ny olona iray ara-dalàna;
Ny fampahalalana momba ny loza mitatao amin'ny fiarovana
Rehefa dinihina ny hevitry ny Komitin'ny Vondrona Eropeana sy Sosialina1
Rehefa dinihina ny hevitry ny Komity Faritra2
Rehefa dinihina ny hevitry ny Mpanolotsaina Miaro ny Data Eropeana3
“… Andininy 17
Raha misy ny risika manokana mety hanelingelina ny fiarovana ny tambajotra na serivisy
serasera elektronika, mpamatsy serasera elektronika mampandre ny mpampiasa azy
mpampiasa farany misy fandrahonana toy izany, ary raha hianjera ivelan'ny faritra misy ny fepetra ny loza
tantanin'ny mpanome tolotra - mampahafantatra ireo mpampiasa farany momba izany
fanafody mety, anisan'izany ny vidiny mety hiatrehana izany
mamatotra .... "
Ahoana ny famoronana kaonty sy sonia ny rindran-damina ao amin'ny ZSMOPL rafitra?
Tsotra ihany, ampy ho an'ny olona misolo tena ny sampana hahazoana izany:
sonia elektronika amin'ny Certum ary hampiasa azy io hanao sonia ny rindranasa ekena ao amin'ny ZSMOPL rafitra,
Enterprise ID taratasy fanamarinana, amin'ny alàlan'ny izany dia hanao sonia ny fampiharana alefa amin'ny rafitra ZSMOPL.
Fotoam-pahamarinana: 2 taona
Enterprise taratasy fanamarinana
Karatra Cryptographic - 3.2 Starcos
Card Reader ACS ACR39T - A1
CD miaraka amina rindrambaiko maimaimpoana:
miasa ireo karatra proCertum CardManager,
ho fanasonia sy fanamarinana ireo e-antitra / rakitra pro Certum SmartSign
Hajia vita amin'ny fotoana voafetra miaraka amin'ny fampahavitrihana (sombiny 5000)
Inona ny sata ara-dalàna asan'ny sonia elektronika mahay?
Eo ambanin'ny eIDAS, manana sonia elektronika mahay (QES) manana fepetra ara-dalàna mitovy amin'ny sonia natao tanana. Fantatra tamin'ny firenena mpikambana rehetra ao amin'ny Vondrona Eropeana.
Faritra inona ny fiantohana hataoko?
Araka ny andininy 25:
"Ny sonia elektronika dia tsy azo lavina fa misy vokany ara-dalàna sy azo ekena ho porofo amin'ny fizotran'ny lalàna noho ny antony fa endrika elektronika na tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny sonia elektronika mahay."
Azo adika io, izay midika fa raha te hanaporofo ny maha-ara-dalàna ny antontan-taratasinao amin'ny toerana ara-dalàna ianao dia mila haavo avo na avo kokoa.
Araka ny filazan'ny eIDAS, ny orinasa mitaky fahatokisana sy fahatokisan-tena avo lenta dia tokony hampiasa sonia elektronika mandroso na mahay. Vahaolana naroso be ho an'ny fikambanana ara-bola, orinasam-panjakana ary firenena mpikambana ao amin'ny EU.
Raha mikasa ny hampiasa takelaka antontan-taratasy ho an'ny fifanakalozana urin'ny mpanjifa ianao, fifanakalozana ara-dalàna na fifanakalozana ara-piraisan'ny ankolafy, tadidio fa ny tahirin-kevitra / angon-drakitra ao amin'ny antontan-taratasinao dia azo itokisana tahaka ireo fomba fiasa ampiasaina amin'ny fiarovana azy.
Farany, tsara ny mampatsiahy fa na dia tsy mamaritra ny fampiasana takelaka nomerika mba hahazoana sonia mandroso aza ny eIDAS, dia mamporisika anao hampiasa azy ireo ianao ary hividy azy ireo amin'ny fahefana fanamarinana azo antoka sy azo antoka. Ilaina ny fifampitokisana eo amin'ny fiaraha-monina raha tianao ho voamarina ho azy ny sonia ary atokisana amin'ny lozisialy firaketana malaza toa ny Adobe na Microsoft. Amin'izay, rehefa manao sonia antontan-taratasy ianao, dia tsy hanana fanarahan-dalàna fotsiny, fa hanana traikefa tsy misy tohiny ho an'ny mpandray ny antontan-taratasy.
Fametrehana elektronika mendrika
Ny "tombo-kase elektronika mendrika" dia midika ho tombo-kase elektronika mandroso izay efa nomena
mampiasa fitaovana elektronika famoronana elektronika mahay ary mifototra amin'ny iray mahay
taratasy fanamarinana tombo-kase elektronika;
Taratasy famantarana sonia elektronika mendrika
'Taratasy sonia elektronika manana alàlana' dia midika fahazoan-dàlana sonia elektronika avoaka
amin'ny alàlan'ny mpanome tolotra fahatokisana mendrika ary mahafeno ny fepetra takian'ny Annex I;
Ny 'sonia elektronika takiana »dia midika sonia elektronika mandroso izay namboarina amin'ny alàlan'ny
Fitaovana elektronika sonia elektronika mahay ary mifototra amin'ny taratasy fanamarinana mahafeno
Ny fomba fanaovan-javatra ho an'ny fanekena ny sisintany miampita ny sonia elektronika mandroso
Araka ny lalàna mifehy ny rafitra eIDAS, ny Parlemanta Eropeana dia naneho ny filàna hanangana fotodrafitrasa ho an'ny daholobe, ka mamorona ny ilana fanamafisana orina eropeana.
Ny Fanjakana mpikambana tsirairay dia takiana amin'ny fametrahana "point of contact single" (PSC) ny serivisy fitokisana efa misy mba hahazoana antoka fa azo ampiasaina ny eID amin'ny fifanakalozana sisintany amin'ny sehatra ho an'ny daholobe, ao anatin'izany ny fahafahan'ny olom-pirenena eropeana misitraka ny fitsaboana amin'ny sisintany.
Metadata dia avy amin'ny fifandraisana elektronika
"Metadata serasera elektronika" dia midika angon-drakitra ao amin'ny
tambazotra fifandraisana elektronika amin'ny tanjon'ny fifindrana, fizarana na fifanakalozana
afa-po amin'ny serasera elektronika; ao anatin'izany ny fanaraha-maso sy angona fampahafantarana
Loharano sy toerana hivoahan'ny raharaham-pifandraisana, data momba ny toerana
fitaovana namboarina mifandray amin'ny serivisy serasera
elektronika sy daty, fotoana, faharetana ary karazana fifandraisana;
Ivontoerana fanamarinana nasionaly
Ivontoerana fanamarinana nasionaly (NCCert) - ny rafitra IT an'ny Banky Nasionaly Polonina natsangana hanatanteraka ny asa nankinina tamin'ny NBP nataon'ny minisitra mahay amin'ny informatika mifanaraka amin'ny zavakanto. 11 ao amin'ny lalàna tamin'ny 5 septambra 2016 momba ny serivisy fitokisana sy fampahafantarana elektronika. Root Certification Authority (antsoina hoe faka) ho an'ny fotodrafitrasa sonia elektronika azo antoka any Polonina, tantanan'ny Departemantan'ny Filaminan'ny Banky Nasionalin'i Polonina.
Ny fototra ara-dalàna amin'ny asan'ny NCCert dia ny alalana nomen'ny minisitry ny toekarena sy ny asa, an'ny Banky Nasionalin'i Polonina, mifanaraka amin'ny lalàna momba ny sonia elektronika. Ny fanomezan-dàlana vaovao, izay mandrakotra ireo lahasa voatanisa ao amin'ny lalàna momba ny serivisy fitokisana sy ny famantarana ny elektronika, dia navoakan'ny Minisitry ny Digitization tamin'ny 27 Oktobra 2016.
Mifanaraka amin'ny zavakanto. 10 amin'ny lalàna momba ny serivisy fampidirana fahatokisana sy elektronika, ny National Certification Centre dia manatanteraka ireto asa manaraka ireto:
mamorona ary hamoaka ny taratasy fanamarinana momba ny mpanome tolotra mendrika ho an'ny fanamarinana ireo sonia elektronika mandroso na tombo-kase elektronika voalaza ao amin'ny Annex I (a) g, teboka III g sy Annex IV lit. h ny Regulation 910/2014, ary ny taratasy fanamarinana ho an'ny fanamarinana ny serivisy fitokisana hafa nomen'ny mpamatsy mpamatsy vola (taratasy fanamarinana mpamatsy fahatokisana);
mamoaka ireo taratasy fanamarinana voatonona ao amin'ny teboka 1;
namoaka lisitr'ireo fanamarinana voaroaka voalaza ao amin'ny teboka 1;
dia mamorona angon-drakitra ho an'ny fanamafisana elektronika ho an'ny fanamarinana voatonona ao amin'ny teboka 1, ary fanamarinana ho fanamarinana ireo tombo-kase (antsoina hoe fanamarinana ny foibe fanamarinana nasionaly).
Ho fanampin'izany, amin'ny maha Foibem-pahamarinana nasionaly azy, ny NBP dia mitazona fisoratana anarana mpamatsy tolotra fitokisana (Andininy faha-3 momba ny lalàna momba ny serivisy fitokisana) ary mamoaka lisitra azo itokisana(lisitry ny anarana hoe TSL), izay fitaovana manohana ny fanamarinana miana sisin-tany amin'ny fanamarinana porofo.
Ny Ivotoeram-panamarinana nasionaly dia tsy manome serivisy fitokisana mendrika araka ny hevitry ny lalàna momba ny serivisy fitokisana sy ny famantarana elektronika (indrindra fa tsy manome mari-pankasitrahana) - ireo orinasa hafa antsoina hoe mpanome tolotra fitokisana mahay no miatrika an'io. Hatramin'ny 17 Novambra 2016, misy mpanome tolotra fahatokisana dimy mahay any Polonina. Ireo dia:
Enigma Systemy Ochrony Information Sp. z o. o
Eurocert Sp. z o. o
Taloha, serivisy fitokisana manana andraikitra (nantsoina teo aloha ho toy ny serivisy fanamarinana) no nomen'ny TP Internet Sp. z o. o., orinasa an'ny Telekomunikacja Polska SA ary ny orinasa Mobicert Sp. z o. o. Samy nanana ny andraikiny ny orinasam-panjakana mba hanome ireo serivisy ireo ary nesorina tao amin'ny fisoratana tamin'ny 30 Jiona 2006 (TP Internet) sy ny 13 Novambra 2013 (Mobicert).
Fiarovana ny votoatin'ny serasera elektronika
Art. Sata mifehy ny zon'ny fototra. Izay fitsabahana amin'ny votoaty fifandraisana
Ny elektronika dia tokony avela voafaritra mazava tsara
toe-javatra sy ho an'ny tanjona manokana ary tokony iharan'ny mety
fiarovana amin'ny fanararaotana. Ity fitsipika ity dia manome ho an'ny
mpampiasa farany Ohatra, ny mpamatsy dia mety manolotra
serivisy izay misy ny fanodinana ny e-mail hanesorana ny PL 18 PL
ny fitaovana efa vita mialoha. Noho ny mombamomba ny atiny
ny serasera ao amin'ity régime ity dia manondro fa ny fanodinana ireo data ireo
Ny resaka momba ny atiny dia hiteraka fandrahonana lehibe amin'ny zon'ny olona sy ny fahafahan'ny olona
ara-batana. Mpanome serivisy serasera elektronika, fanodinana ity karazana data,
dia tokony hifanerasera amin'ny fahefana mpanara-maso alohan'ny fanodinana.
Ny fakan-kevitra toy izany dia tokony hifanaraka amin'ny Article 36 fehintsoratra 2 sy 3 amin'ny Fitsipika (EU)
2016/679. Io fiheverana io dia tsy misy ny fanodinana ireo angon-drakitra atiny amin'ny tanjona
omeo ny serivisy nomen'ny mpampiasa farany rehefa mpampiasa
ny fanekena farany amin'ny fanodinana toy izany ary natao ho an'ny filana toy izany
serivisy ary mandritra ny vanim-potoana tena ilaina sy mizara ho azy. Rehefa avy mandefa
ny votoatin'ny serasera elektronika nataon'ny mpampiasa farany ary ny fahazoana azy
mpampiasa farany kendrena na mpampiasa tanjona farany
io votoaty io dia mety ho voavonjy na tehirin'ny mpampiasa farany,
mpampiasa farany na antoko fahatelo nankinin'ireo mpampiasa farany
hitahiry na fitehirizana data. Izay misy fanodinana tahirin-kevitra toy izany
dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny Fitsipika (EU) 2016/679…. "
Vatan'olona voarohirohy amin'ny fizotran'ny sonia nomerika
Vatana fanombatombana mirindra- vatana iray izay nahazo fankatoavana mifanaraka amin'ny Art. 2 amin'ny Fitsipika (EC) laharana 765/2008 mba hanombanana ny fanarahan-dalàna ataon'ny mpiandraikitra matoky ny serivisy sy ny serivisy fitantanana azy.
Mpanome tolotra fitokisana- ny mpanome tolotra fitokisana ho mpanome tolotra fahatokisana mendrika na tsy mendrika.
Mpanome tolotra fahatokisana mendrika- orinasa iray nahazo ny toeran'ny fahefana mpanara-maso hanome serivisy fitokisana mahay
Fitaovana famoronana sonia nomerika
Fitaovana famoronana sonia mendrika (QSCD)- Ity fitaovana ity dia manome ny mari-pamantarana nomerika amin'ny alàlan'ny rindrambaiko sy ny fikirakirana entiny hahazoana antoka fa ny mpana sonia irery no mifehy ny lakileny manokana, fa ny angona famoronana sonia dia novokarina sy tantanan'ny mpanome tolotra fitokisana mahay, ary tsy manam-paharoa ireo angona famoronana sonia. tsiambaratelo ary arovana amin'ny fanaovana sandoka.
Fitaovana mpamorona sonia azo antoka (SSCD)- Ity fitaovana ity dia tsy maintsy miantoka fa ny angon-drakitra famoronana sonia tafiditra amin'ny famoronana sonia dia tokana, miaro amin'ny fisandohana sy ny fanovana aorian'ny famoronana sonia.
Mpanome tolotra fahatokisana mifanaraka amin'ny eIDAS
Sonia nomerika EIDAS
Araka ny Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS), ny mpanome tolotra fahatokisana (TSP) dia faritana ho " olona voajanahary na ara-dalàna izay manome serivisy fitokisana iray na maromaro ho mpanome tolotra fitokisana mendrika na tsy mendrika. "
Ny TSP dia tompon'andraikitra amin'ny fiantohana ny famantarana elektronika an'ireo nanao sonia sy serivisy amin'ny alàlan'ny mekanisma fanamafisana matanjaka, mari-pahaizana nomerika ary sonia elektronika. Ny eIDAS dia mamaritra ny fomba hanatanterahan'ireo mpanome tolotra fitokisana ireo serivisy fanamarinana sy tsy fandavana ary ahoana ny fomba hitantanana sy ekena azy ireo any amin'ireo mpikambana ao amin'ny EU.
Tehirizo ny fotoana sy ny vola
Ny fandefasana antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny Internet dia mora vidy, malefaka ary mahatazona ny fotoana anananao. Ny fanonta, avy eo ny famenoana sy fanaovana sonia ireo taratasy ireo. Ho fanampin'izay, adinonao ny fanisiana tombo-kase, ny valopy ary ny fandefasana miaraka amin'ny vidiny.
Nalefa avy hatrany tamina fomba azo antoka ny antontan-taratasy ary nahazo fanamafisana ofisialy ny fandraisana ianao. Tena ilaina izany indrindra rehefa tsy maintsy mandefa antontan-taratasy betsaka isam-bolana ianao.
Jereo ny habetsahan'ny orinasan'ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fampiasana sonia elektronika mahafeno
manangana antontan-taratasy manodidina ny 50 isam-bolana
manangana antontan-taratasy manodidina ny 150 isam-bolana
manangana antontan-taratasy manodidina ny 500 isam-bolana
46 917 PLN
* Fandraketana orinasa iray manana sonia elektronika isan-taona
Ity ambany ity dia ohatra iray amin'ny lisitry ny fandaniana mifandraika amin'ny fandefasana antontan-taratasy amin'ny orinasa kely ho an'ny Poczta Polska sy ho an'ny sonia elektronika mahay.
Fandefasana antontan-taratasy amin'ny volana amin'ny taona ny vola isam-bolana vidiny isan-taona / 2 taona vidiny ao anatin'ny 2 taona
Fanitsiana ireo sonia 3 36 20.40 zł PLN 244.48 / PLN 488.96 0 zł
Volavolan-dalàna ara-dalàna nanasonia 8 96 54.40 zł 652.80 PLN / 1 305.60 PLN 0 zł
Fanambarana voasoratra tao amin'ny biraon'ny hetra sy ny trano fiantohana ara-tsosialy 2 24 13.60 zł PLN 163.20 / PLN 326.40 0 zł
Taratasy ofisialy 2 24 13.60 zł PLN 163.20 / PLN 326.40 0 zł
Taratasim-pitsarana 1 12 6.80 zł PLN 81.60 / PLN 163.20 0 zł
Paompy ho an'ny fandefasana 5 60 3,5 zł PLN 42.00 / PLN 84 0 zł
Fametahana sonia - - - - 499 zł
miaraka 21 252 112.3 zł PLN 1347,28 / PLN 2694.56 499 zł
* vidin'ny valopy iray 0,70 PLN,
* Ny vidin'ny fandefasana antontan-taratasy Poczta Polska PLN 6,80
* Sonia elektronika (sonia napetraka mandritra ny 2 taona miaraka amin'ny fampahavitrihana, fametrahana ary fanofanana, omena ny vidiny net)
"Mailaka elektronika" dia midika hoe misy hafatra elektronika misy
fampahalalana, toy ny lahatsoratra, feo, horonan-tsary, feo na sary, miparitaka ao anaty tamba-jotra
serasera elektronika, izay hafatra azo tehirizina ao amin'ny tambajotra na
ao amin'ny fotodrafitrasa momba ny informatika na miaraka amin'ny fitaovana faran'ny mpampiasa
hafatra toa izany;
Fikambanan ny sehatra ho an'ny daholobe
"Fikambanan'olona eo amin'ny sehatry ny daholobe" dia midika vondrom-bahoaka, faritra na eo an-toerana, vatana na vatana misy lalàna momba ny vahoaka
fikambanana iray na fikambanana iray na maromaro na fikambanana ara-dalàna toy izany
orinasam-panjakana na tsy miankina iray farafaharatsiny amin'itony vatany, sampana na iray amin'ireny
Ny fikambanana dia nanome alàlana hanome ny serivisy ho an'ny daholobe rehefa mihetsika amin'ny fototry ny toy izany
Ny 'sonia elektronika' dia midika ny angon-drakitra amin'ny endrika elektronika mifatotra na lojika mifandray amin'ny hafa
angon-drakitra amin'ny endrika elektronika ary ampiasain'ny sonia ho sonia;
Ny foto-kevitra momba ny "olona ara-dalàna"
Ny foto-kevitr'ireo "olona ara-dalàna" mifanaraka amin'ny fepetra omen'ny Fifanarahana momba ny Fampiharana ny Vondrona Eropeana (TFEU) momba ny
Mandao sampandraharaha afaka misafidy ny endrika ara-dalàna, ny mitantana orinasa.
izay heveriny fa mety amin'ny fanatanterahana ny asany. Noho izany, ny teny hoe "olona legal" ao anaty dikany
Ny TFEU dia midika hoe ny orinasa rehetra izay miorina ao amin'ny lalànan'ny Fanjakana mpikambana
ity lalàna ity, na inona na inona endrika ara-dalàna ho azy ireo.
Ny fanodinana data sy fiarovana
NY FANAVOTANA (EKE) NO 910/2014 NY FONDRANA SY TRANO NY EUROPEAN
tamin'ny 23 Jolay 2014
momba ny fampahafantarana elektronika sy ny serivisy fitokisana mifandray amin'ny fifanakalozana elektronika
eny amin'ny tsena anatiny ary hamerina ny Directive 1999/93 / EC
Raha dinihina ny fifanarahana momba ny fampandehanana ny vondrona eropeana ary indrindra ny lahatsoratra 114,
Rehefa dinihina ny hevitry ny Komitin'ny toekarena eropeana sy ara-tsosialy (1),
Asa araka ny fomba fanaovan-dalàna (2),
1. Ny fametrahana angon-drakitra manokana dia tanterahina mifanaraka amin'ny fepetra ao amin'ny Direction 95/46 / EC.
2. Raha tsy misy fanavakavahana amin'ny vokatry ny lalàna izay eken'ny lalàna nasionaly amin'ny anaram-bositra, dia tsy azo atao ny mandrara
anaram-bositra amin'ny fifanakalozana elektronika.
ôrdônansy dia asa ara-dalàna an'ny Vondrona Eropeana izay lasa azo tanterahina avy hatrany toy ny saika ny mpikambana ao amin'ny mpikambana rehetra. Ny lalàna dia azo avahana amin'ny torolalana izay raha ny tokony ho izy dia tokony havadika ho lalàna nasionaly. Ny lalàna dia azo raisina amin'ny alàlan'ny fomba fanaovan-dalàna isan-karazany arakaraka ny foto-kevitr'izy ireo.
eIDAS dia ampiasaina manerana ny EU. Ny fanjakana mpikambana tsirairay dia manara-maso ny mpanome tolotra fitokisany ary manaiky serivisy fitokisana avy amin'ny fanjakana mpikambana hafa. Izany dia miantoka ny fifaninanana eo amin'ny tsena sy ny mety fampiasana serivisy fitokisana fifaninanana.
Ny lalàna momba ny serivisy momba ny elektronika sy ny serivisy fitokisana dia hisy fiantraikany amin'ny EU manontolo. Ny fidiran'ny andrim-bola amin'ny fampiroboroboana ireo fitaovana ireo dia hahafahan'ny mpanjifa sy ny vokatra ara-bola hanana serivisy lavitra kokoa mifanaraka amin'ny filan'ny fifanakalozana elektronika. Ny maodelim-pandraharahana vaovao dia ahafahana manatona mivantana ireo mpampiasa serivisy elektronika ary mety hitarika fihenam-bidy sy fotoana ilaina amin'ny serivisy mivantana sy ny fikirakirana antontan-taratasy.
Vokatry ny lalàna ara-dalàna amin'ny hajia elektronika
1. Ny fiantraikany ara-dalàna amin'ny hajia elektronika dia tsy anontaniana na ekeny ny fanekena azy
amin'ny raharaham-pitsarana fotsiny dia noho ny antony anaovana io marika io amin'ny endrika elektronika na tsy mifanaraka
fepetra takiana vita amin'ny elektronika mahafeno fepetra.
2. Ny hajia elektronika mahafeno fepetra dia hampiasa ny fiheverana ny fahamarinan'ny daty sy ny fotoana asehoany ary
ny fahamarinan-toerana misy ifandraisany sy ny daty voatondro.
3. Ny marika elektronika manana mari-pankasitrahana navoaka ao amin'ny Fanjakana iray mpikambana dia tokony hoheverina ho mahafeno fepetra
hajia elektronika amin'ny firenena mpikambana rehetra.
ny fampahafantarana elektronika dia midika hoe
Ny dikan'ny hoe 'electronic identification' dia midika fa azo tsapain-tanana azo tsapain-tanana na tsy takatry ny saina
olona iray ary nampiasaina ho fanamarinana ho an'ny serivisy an-tserasera;
Ny antoko miantehitra
Ny hoe "fety miova" dia midika olona voajanahary na ara-dalàna miankina amin'ny anarana famantarana na serivisy elektronika
Rafitra fampahafantarana elektronika
Ny 'rafi-pihariana elektronika' dia midika hoe rafitra fampahafantarana elektronika izay alain'ny vola
famantarana elektronika ho an'ny olona voajanahary na ara-dalàna na olona voajanahary izay misolo tena ny olona ara-dalàna;
Serivisy fanaterana elektronika voasoratra anarana
"Serivisy fanaterana elektronika voasoratra" dia midika serivisy ahafahana mampita ireo angon-drakitra eo amin'ireo antoko
fahatelo elektronika ary manome porofo mifandraika amin'ny fampiasana data nafindra,
ao anatin'izany ny porofon'ny fandefasana sy ny fandraisana data, ary ny fiarovana ny angon-drindrina amin'ny fiarovana ny fatiantoka, ny halatra,
fahasimbana na fanovana tsy nahazoana alàlana;
Ny serivisy fitokisana
Ny serivisy fitokisana dia serivisy elektronika izay, ankoatry ny fanamarinana ny tranokala, dia tompon'andraikitra amin'ny famoronana, fanamarinana ary fanamarinana sonia elektronika, tombo-kase, fitehirizana fotoana, serivisy fanaterana ary mari-pankasitrahana izay ampiasaina amin'ireo serivisy ireo. Tompon'andraikitra amin'ny fitehirizana ireo sonia, tombo-kase na fanamarinana elektronika ireo ihany koa izany.
Inona ny serivisy fitokisana?
Ny serivisy fitokisana dia serivisy elektronika izay misy iray amin'ireto:
Mamorona, manamarina ary manamarina mari-pankasitrahana ampiasaina amin'ny fanamarinana tranonkala.
Ho an'ny serivisy fitokisana azo raisina ho serivisy fitokisana mendrika, ny serivisy fitokisana dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra takian'ny Fitsipika eIDAS. Ny fampiasana serivisy fitokisana dia manome lamina fitokisana amin'ny fifandraisana mitohy amin'ny fifanakalozana elektronika eo amin'ny firenena sy ny fikambanana.
Ny 'serivisy fitokisana' dia midika serivisy elektronika matetika omena amin'ny tambin-karama sy fandrakofana:
a) fananganana, fanamarinana ary fanamarinana ireo sonia elektronika, tombo-kase elektronika na marika elektronika
fotoana, serivisy fanaterana elektronika voasoratra anarana ary fanamarinana mifandray amin'ireo tolotra ireo;
b) ny fananganana, ny fanamarinana ary ny fanamarinana ny tranokala fanamarinana ny tranonkala; na
c) fikojakojana ny sonia elektronika, tombo-kase na fanamarinana mifandraika amin'ireto serivisy ireto;
Serivisy fifandraisana serasera
"Serivisy serasera" Interpersonal "dia misy ny serivisy
izay ahafahan'ny serasera ifampiraharahana sy fifaneraserana na dia ampahany amin'ny
asa fanohanana kely izay misy amin'ny serivisy hafa.
Ny "fanamarinana" dia midika fa dingana elektronika izay ahafahan'ny fampahafantarana elektronika olona iray voajanahary na
ara-dalàna na fanamafisana ny fiandohana sy fahamarinan'ny angon-drakitra voamarina amin'ny endrika elektronika;
Ny 'Validation' dia midika ny fizotran'ny fanamarinana sy ny fanamafisana ny maha-ara-dalàna ny sonia elektronika na hajia elektrika.
FIKARAKANA HO AN’NY FAMPISORANA FOTOM-PANAVOTRA FAMPISEHOANA ELIGIBLE
Ny fanamarinana mendrika ho an'ny tombo-kase elektronika dia misy:
a) Famantarana - farafaharatsiny amin'ny endrika manome alalana fanodinana mandeha ho azy - fa ny taratasy fanamarinana dia navoaka
ho fanamarinana fahazoana tombo-kase elektronika;
(b) andiana angon-drakitra izay mifaneho amin'ny maha-mpamatsy serivisy ny fanomezana mpamatsy serivisy
fanamarinana mitakona farafaharatsiny ho an'ny Fanjakana mpikambana izay ametrahana ny mpamatsy, ary
- ho an'ny olona ara-dalàna: ny anarana ary, raha ilaina, ny laharana fisoratana anarana araka ny nomera ofisialy
- ho an'ny olona voajanahary: anarana sy solon'izany olona izany;
(c) farafaharatsiny ny anaran'izay olona mihatra amin'ny hajia ary, raha ilaina, laharana fisoratana anarana araka ny nomera ofisialy azy
(d) angon-drakitra manamarina ny tombo-kase elektronika izay mifanaraka amin'ny angon-drakitra momba ny famoronana tombo-kase elektronika;
e) angon-drakitra momba ny fanombohana sy ny fiafaran'ny vanim-potoanan'ny taratasy fanamarinana;
(f) ny kaody famantarana famantarana, izay tsy maintsy miavaka ho an'ny mpamatsy tolotra fahatokisana;
(g) sonia elektronika mandroso na tombo-kase elektronika mandroso amin'ny famoahana mpamatsy mendrika
h) toerana iray izay ametrahana ny taratasy fanamarinana miaraka amin'ny sonia elektronika mandroso maimaim-poana
na tombo-kase elektronika mandroso resahina ao g);
(i) ny toeran'ny serivisy izay afaka ampiasaina manontany momba ny sata maha-ara-dalàna ny taratasy fanamarinana mahafeno;
j) raha ny angon-drakitra famoronana elektronika mifandraika amin'ny angona elektronika fanamarinana
dia ao anaty fitaovana fananganana tombo-kase elektronika mahafeno fepetra, famantarana marika
farafaharatsiny amin'ny endrika manome alalana fanodinana mandeha ho azy.
FIKOROHANA NY FIKAMBANANA VONDRINDRA MAMPIKAOKE
Misy ny fanamarinana sonia elektronika manana alàlana manaraka ireto:
ho fanamarinana sonia elektronika mahafeno fepetra;
c) farafaharatsiny ny anarana sy ny anarana miantso ny sonia na ny anaram-bositra; raha atao solonanarana anarana, mazava io tranga io
d) angon-drakitra manamarina ny sonia elektronika izay mifanaraka amin'ny angon-drakitra ampiasaina amin'ny famoronana sonia elektronika;
i) toerana serivisy azo ampiasaina amin'ny fangatahana ny sata manamarina ny taratasy fanamarinana mahafeno;
j) izay misy ny angon-drakitra momba ny famoronana elektronika mifandraika amin'ny angon-drindrina
Ny sonia elektronika dia ao anaty fitaovana fananganana sonia elektronika mahafeno, raha ilaina
fanondroana io tranga io farafaharatsiny amin'ny endrika mamela ny fanodinana mandeha ho azy.
Fangatahana ireo hajia elektronika mendrika
1. Ny hajia elektronika mahafeno ny fepetra takiana amin'ireto fepetra ireto:
a) ampifandraisina amin'ny daty sy ny fotoana miaraka amin'ny angon-drakitra, mba hanilihana tanteraka ny mety hisian'ny fiovana tsy azo ovaina ao amin'ny angon-drakitra;
b) mifototra amin'ny loharanom-potoana voafetra mifandray amin'ny fotoana iraisan'ny rehetra; ary
c) nasiana sonia mampiasa sonia elektronika mandroso na mitondra tombo-kase elektronika mandroso
mpanome tolotra fahatokisan-tena mendrika na fitoviana.
2. Ny Komisiona dia afaka, amin'ny alàlan'ny fampiharana ny hetsika, ny manondro ny marika fenitra momba ny fanamorana daty
ary fotoana misy data sy loharano mazava tsara. Aiza ny fifandraisana sy ny fotoana misy ny data sy mazava
mahafeno ireo fenitr'asa ireo ny loharanom-potoana, araka ny fanarahana ny fepetra takiana napetraka ao amin'ny paragrafy 1. Ireo asa fampiharana
dia ampanaovina araka ny fomba fiasa voalaza ao amin'ny Article 48 fehintsoratra 2.
Fangatahana ireo serivisy fanaterana fisoratana anarana elektronika mahafeno fepetra
1. Ireo serivisy fanaterana elektronika voasoratra anarana dia mahafeno ireto fepetra ireto:
(a) omen'ny mpanome serivisy fitokisana iray na mihoatra izy ireo;
b) izy ireo no miantoka fa ny mpandefa dia fantatra fa manana mari-pahaizana avo lenta;
c) miantoka ny fampahafantarana ny addressee alohan'ny hanomezana ny angona;
d) ny fandefasana sy fahazoana angon-drakitra dia arotsaka amin'ny alàlan'ny sonia elektronika mandroso
ny tombo-kase elektronika ho an'ny mpamatsy tolotra fahazoan-dàlana amin'ny fomba iray mba hanesorana ny mety hiseho tsy azo esorina
miova ny angona;
(e) ny fanovana ny angon-drakitra ilaina amin'ny fandefasana na fandraisana data dia aseho mazava amin'ny mpandefa sy mpandray azy
f) ny daty sy ny fotoana fandefasana, fandraisana sy ny fanovana ny angon-drakitra dia atolotry ny fitaovana elektronika mahay
Ho an'ny famindrana angon-drakitra eo anelanelan'ny mpamatsy serivisy roa farafahakeliny, ny fepetra takiana
resahina amin'ny teboka (a) ho (f) miatra amin'ny mpamatsy serivisy fitokisana rehetra.
2. Ny vaomiera dia amin'ny alàlan'ny fampiharana ny hetsika, ny manondro ny marika fenitra momba ny fomba fiatoana
ary mandray data. Raha mahafeno ireo fenitra ireo ny fizotran'ny fandefasana sy alàlan'ny angon-drakitra, dia asiana izany
fanarahana ireo fepetra takina ao amin'ny fehintsoratra 1. Ireo fampiharana ireo dia ampiharina arakaraka ny fomba fizahana,
resahina amin'ny art. 48 fehintsoratra 2.
Hajia vita amin'ny fotoana mendrika
Ny serivisy "Time Stamp" dia ilaina amin'ny toe-javatra izay misy ny daty manana andraikitra lehibe amin'ny fanamarinana sy fanamarinana ireo karazana antontan-taratasy, fifanekena na fanamarinana isan-karazany.
Izy io dia karazana "label" aseho amin'ny taratasy elektronika na fampiharana, amin'ny alàlan'ny ahafahanao mamaritra mazava tsara ny daty marina sy ahazoana azy amin'ny famoronana na sonia.
Ny Time Stamp dia azo ampiharina manokana amin'ny fifanarahana sy varotra miaraka amin'ireo mpiara-miasa amina orinasa, mpanjifa ary andrim-panjakana.
Ny fotoana nanoratana ny antontan-taratasy dia tsy mifototra amin'ny vanim-potoana rafitra (workstation na server), fa avy amin'ny loharano mahaleo tena, izany no Antoko Fahatokisana Voatana.
Ireo antontan-taratasy misy takelaka Time (e.g. invoice na rindranasa) dia voaro amin'ny fanaovana hosoka sy famerenana. Vokatr'izany dia azo atokisana tanteraka ho an'ny orinasa rehetra, andrim-panjakana, birao ary mpanjifa tsirairay izy ireo.
Ny serivisy fanoratana fotoana elektronika mahafeno fepetra dia mifanaraka amin'ny Art. Fitsipika 42 an'ny Parlemanta eropeana sy ny filankevitry ny vondrona eropeana laharana 910/2014 tamin'ny 23 jolay 2014 (eIDAS)
Fanarahana ny eIDAS (Voalohany tany Polonina)
Misy fiantraikany ara-dalàna amin'ny daty iray
Famenonana azo itokisana
Mampiaraka ny antontan-taratasy sy ny sonia elektronika (SHA1)
* Famindrana ny mari-pahaizana ho an'ny CERTUM Ho an'ny mpanjifa vaovao + 5000 fotoana hajia ho fanomezana
Fampiharana lehibe - fanefitra fotoana:
ny fifanarahana nalefa elektronika amin'ny banky, andrim-piantohana sy orinasa mpiara-miasa,
rindranasa sy fampiharana alefa amin'ny endrika elektronika ho an'ny biraon'ny sampam-panjakana,
fangatahana elektronika nalefa tamin'ireo mpandray ireo tamin'ny endrika elektronika.
Ny tombony lehibe indrindra:
fiantraikany ara-dalàna amin'ny 'daty tokana' ao amin'ny dikan'ny Code Civil,
azo antoka ny famoronana antontan-taratasy amin'ny fotoana voafaritra,
miantoka ny fiarovana ny varotra amin'ny Internet,
fiarovana ny programa informatika hanoherana ny hosoka sy ny otrikaretina virus.
Te hanatevin-daharana ny mpitana Time Stamp ve ianao, misy manana fanontaniana? Mandefasa hafatra amin'ny: biuro@e-centrum.eu ampidiro ny anaranao, miantso anarana sy nomeraon-telefaona anao. Antsoy +58 333 1000 XNUMX Ho hitan'ny mpanoro hevitra anao.